Allgedo.com » 2012 » November » 03
Home » Archive Daily November 3rd, 2012
Sababihii Abukar Awale (Qaad-diid) ku dhaliyay in uu joojiyo qaad cunka, isla markaana u guntado la dagaalankiisa! (Daawo Video)
Waxay aheyd February 14, 2004 markii anigoo qaad ku cunaya guri ku yaal magaalada London ee dalka Ingiriiska aan la kulmay dhib weyn oo noolasheyda halis galiyay, ayada oo waxii markaas ka horeysayna la’igu tilmaami karay in aan ka mid ahaa dhalinyarada ama odayaasha Soomaaliyeed ee laasintay cunista qaadka, sidaas awgeedna uu qaadku ku hayey dhibaato balaaran. Xaqiiqdii maalinkaasi waa mid taariiq...
Qaraxyo Ismiidaamin ah oo ka dhacay Baar ku yaal Magaaladda Muqdisho
Qarax Ismiidaamin ah oo ka dhacay Magaalada Muqdisho ayaa waxaa kasoo baxay Faahfaahintii ugu horeysay ee laga soo xigto goob joogayaasha. Sida ay Sheegayaan wararka laga helayo ciidamada dowladda ee goobta tagay, ilaa iyo 5 qof ayaa ku dhimatay oo labo kamid ah ay ahaayeen kuwii is qarxiyay tiro kale oo dhaawac ahna Hosbitaalada ayaa loo qaadayaa, iyadoo ka hor inta aysan is qarxin ay ragaan Rasaas...
Madaxweynaha dowlada oo wafdi udiraya Magaaladda Kismaayo
Madaxweynaha dowlada Soomaaliya ayaa lagu wadaa inuu wafdi udiro Magaaladda Kismaayo si ay wada xaajood ula yeeshaan ganacsatada Magaaladaas. Wafdigan ayaa lakulmi doona gamacsatada dhanka dhuxusha Kismaayo si ay ugala hadlaan arinta ku aadan mamnoocida dhuxusha ee Kismaayo. Koronayl Aadan Ibraahim oo ka mid ah saraakiisha dowladda Soomaaliya ee jooga magaalada Kismaayo ayaa sheegay in wafdigaas marka...
Wasaarada Gaashaandhiga oo baaq ujeedisay ganacasatada Kismaayo
Wasaarada Gaashaandhiga dowlada Soomaalia ayaa shaaca ka qaaday inaysan macquul ahayn in dekada Magaaladda Kismaayo laga dhoofiyo dhuxusha. Wasiirka Arimaha Gaashaandhiga dowlada Soomaaliya Xuseen Carab Ciise oo hogaaminayay wafdi ka socda dowlada Soomaaliya oo Kismaayo gaaray ayaa waxaa uu sheegay in ganacsatada Kismaayo looga baahan yahay in ay wax aan ahayn dhuufinta dhuxusha ka dhigtaan ganacsi. “Ganacsatada...
Taliyaha Ciidamada Xooga dalka oo beeniyay in ay jirto Raaskambooni
Taliyaha ciidamada xoogga dalka Gen C/Qadir Cali Diini ayaa isagoo kusugan Magaaladda Kismaayo waxaa uu sheegay in qabashadii Magaaladda Kismaayo aysan wax lug ah ku lahayn Kooxda Raskambooni. Waxaa uu sheegay in aysan jirin wax la yiraahdo Raaskambooni oo ay la socoto dowlada Soomaaliya in ay Kismaayo joogaan. “Raaskambooni jooga Kismaayo ama ay la socoto dowlada Soomaaliya ma jirto waxa meesha...
Biyo la’aan xoogan oo ka taagan qeybo kamid ah Gobolka Gedo
Wararka naga soo gaaraya qeybo kamid ah gobolka Gedo ayaa sheegaya in ay ka jiraan biyo la’aan xoogan. Biyo la’aantan ayaa saamaysay dadka iyo xoolaha iyadoona ay jiraan deegano si gaar ah ay biyo la’aantaas usaamaysay. Deegaanka Garinley oo kamid ah deegaanada hoostaga magaaladda Baardheere ee gobolka Gedo ayaa ah halka ugu daran ee haatan biyo la’aanta ay ka jiraan. “Biyo...
Axmed Madoobe: Dhaqaalaha Kismaayo waxaa uu ku jiraa Dhuxusha
Hogaamiyaha Kooxda Raaskambooni Sh Axmed Islaam Axmed Madoobe ayaa shaaca ka qaaday in ay hadii aan la fasaxin dhoofinta dhuxusha magaaladda Kismaayo ay wax badan qaldami doonaan. Isagoo kahadlayay kulan ka dhacay Magaaladda Kismaayo ayaa Axmed Madoobe waxaa uu sheegay inuu doonayo in la ogolaado in dhuxasha laga dhoofiyo Kismaayo dekadeeda. ‘Waxaa dalbanaynaa in cuna qabataynta dhoofinta dhuxusha...